Imbwa Collar Izvi hazvingori Imbwa Collar chete, imbwa Collar ine tsvina inogadziriswa mutsipa. Frida iri kushandisa yemhando yepamusoro yeganda neine rakasimba ndarira. Paakagadzira chidimbu ichi aifanirwa kufunga nezvenzira yakapeteka yekusungira mutsipa uku imbwa ichipfeka collar. Kollar yaifanirawo kunge iine moyo wakasununguka pasina muhuro. Neiyi dhizaini, rinokanganisa mutsipa, muridzi anogona kushongedza imbwa yavo kana vada.
Imbwa Collar Imbwa Collar Sinamoni Roll Nehuchi Chikafu Chinwiwa Kapu